Zvizorwa Dentistry | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
OptiSmile Yepamberi Dentistry uye Implant Center
Vanonyanya Kuverengwa Vanachiremba Vanachiremba muCape Town
+ 27 87 702 6886
Invisalign Bvisa Braces
Zoom Meno Kuchenesa Cape Town
Chii chinonzi Periodontist?
Ndine Nguva Yakaganhurirwa
Kuchengeta uye kufema kufema
Mazino Inlays & Kupeta
Iyo Inofambisa Wand
Sei Us Sarudzai?
Chiremba wemazino padyo neni wongororo
Zvizorwa Zvemazino eKapa
Kuwanazve Kunyemwerera Kwako
Vanodhirowa mazino muCape Town vanobata nekuonekwa kwemazino nekusimudzira kunyemwerera kwemunhu. Zvishongedzo mazino inosanganisira hunyanzvi hwakawanda uye hunyanzvi uye isu tinoshandisa humwe hunyanzvi matekinoroji kushanda nevarwere vedu kugadzira kwavo kunyemwerera kwakanaka. Ichi ndicho chikonzero nei dzimwe nguva tichitaura nezvazvo cosmetic mazino sekunyemwerera dhizaini uye shandisa matekinoroji edhijitari kubatsira mukuchinja kukuru kwekunyemwerera kwevarwere vedu.
Mazhinji maitiro akajairika emazino anoitwa neyekushongedza wemazino muCape Town, nekuda kwekudikanwa nekuti munhu ari kurwadziwa kana kusagadzikana, uko kwekushambadzira maitiro hakuite kuva nepfungwa imwechete yekukurumidzira. Izvo hazvireve kuti ivo havadiwe, kunyanya mune izvo zviitiko apo vanhu vanonzwa zvakanyanya kuzvidya mwoyo pamusoro pemeno avo kana kana meno asipo anogona kutungamira kumatambudziko akaoma emazino nekudzikira.
Maitiro Ekurapa Mazino Anogona Kubatsira Kunyemwerera Kwako
Zviitiko zvakakosha uye mashandiro zvinowanzoreva chikafu chakanaka, kambani hombe uye yakawanda mifananidzo! Uine huwandu hwemidhiya yekugovana netiweki uye mawebhusaiti akatenderedza, iwe unoda kukwanisa kutaridzika zvakanaka pane yega yega uye yakajeka, yakanaka kunyemwerera ndiyo kiyi yekuzadzisa izvi!
Nekutenda, kune akati wandei ekukurumidza ekurapa ekurapa ayo anogona kuitwa mukushanya kumwechete kune wekuzora mazino kuCape Town, nemhedzisiro inoshamisa! Maitiro emaminetsi ekupedzisira anozoita kuti utarise pikicha yakakwana munguva yechiitiko chako chinotevera.
Mhando dzeCosmetic Dentistry?
Maitiro akajairika anoshandiswa mukushongedza mazino anogona kuve nyore, asi mamwe akaomesesa uye anoda kutarisirwa kwakasarudzika.
Inlays, Onlays uye Overlays
Iyo inozivikanwa zvakare seisina kunangana kuzadza (yakagadzirwa ne CEREC tekinoroji), ayo anoshandiswa kana zino riine hunyoro kusvika pakuenzanisa kuora kana pasina kukwana kwemazino mamiriro kutsigira kuzadza. Kunze kwekunge pasina kukuvara kumazino ezino, iyo inlay inoiswa yakanangana neziso rezino. Nekudaro kana iwo mapoinzi ekorona kana chikamu chikuru cheino zino chakakuvadzwa kufukidzwa kana kufukidzwa kunoshandiswa pachinzvimbo chekufukidza ziso rose rezino.
Inlays uye onlays anoitwa kuOptiSmile kubva kune yakasanganiswa resin zvinhu uye yakasungirirwa kumazino neanamatira mazino esimende. Ivo vanopa rutsigiro kusimbisa meno ako, kudzorera chimiro chavo uye kudzivirira chero kumwe kuora kana kuora.
Mubatanidzwa wekubatanidza unoreva kugadziriswa kwemazino akaora, akakuvara kana akasviba mavara achishandisa zvinhu zvakafanana nemuvara wezino enamel. PaOptiSmile tinoshandisa yedu Leica maikorosikopu kuti uone dambudziko, bvisa kuora kwezino uye woisa chinoumbwa pameso ezino. Izvi zvinobudirira kufukidza kukuvara kwezino uye zvinopa kutaridzika kwezino rine hutano munzvimbo yaro. Kubatanidza ndeimwe yeasina kudhura ekushongedza mazino maitiro anowanikwa kune varwere vane kuora kwemeno, kutsemurwa, kutsemuka kana mazino akavhunika.
Unyanzvi hwekushandisa resin rinoumbika kumazino ako, kuitira kuti ugadzire mazino ane cosmetic uye mamiriro ehurongwa. Matekinoroji nyowani anokanganisa zvishoma - achikusiya uine mamwe mazino ako mazino uye kupera kwakanaka.
Porcelain Veneers haatombokundikana kushamisika - vanogona kuvhara chip, kuvanza kutsemuka, kuita kuti ruvara runyangarika, kana kugadzirisa zino rakashata uye mhedzisiro yacho yakanaka. Maitiro acho anokurumidza kushamisika, aine mashoma nguva yekudzosa.
Veneers Iwo akanyanya makapu akagadzirirwa kufukidza pamberi peziso rako kana mazino mazhinji. Mavhenekeri emazino akagadzirwa ega ega kune mumwe murwere kuti afanane nemazino avo echisikigo, atinoita tichishandisa edu epamberi CAD / CAM technology. Dzinotaridzika chaizvo uye dzinogona kugadzirisa matambudziko ekushambadza, senge mazino akakombama, enamel akatsemuka kana kukuvara uye kunyange maburi anooneka pakati pemazino maviri. Veneers anoiswa kumberi kwezino rimwe nerimwe nekunamatira kwemeno.
Iyo yekupedzisira mineti yekupedzisira yekushongedza inobata kumusoro - mazino machena anokupa iwe kupenya, kunyemwerera kwakanaka pasina chero kunetseka. Tinogona kupenya kunyemwerera kwako neakaverengeka emumvuri muchikamu chimwe chete, saka iyi inguva yekupedzisira yakanaka yekuwedzera kune yako yepati prep!
Mazino akachena inoitwa kamwe danda, tartar uye mamwe marara akacheneswa kubva pamusoro pezino rega rega, kudzoreredza iwo maitiro echisikigo. Mazino anogona zvakare kucheneswa kuti uwane kunyange wakareruka mumvuri pane uyu wekutanga ruvara.Nekufamba kwenguva mazino anova akasviba uye anopfekwa kubva kuchikafu, zvinwiwa, mishonga uye yakashata miitiro yako pachako sekusvuta. PaOptiSmile tine sarudzo dzinogona kuitwa pachigaro kana kumba.
Mazino okuisira anoshandiswa kutsiva mazino mushure mekurasikirwa kwezino. Kutanga tinoshandisa yedu Orthophos 3D X-Ray kuona uye kuziva poindi yekuti diki titanium sikuruu ichaiswa mukati meshaya. Iyo screw ichashanda sekutsigira korona. Izvo zvinomisikidzwa zvinenge zvisingaenzanisike kubva kumazino epanyama akapoteredzwa, uye kana pfupa uye inotsigira tishu fuse kune inoisirwa, inochengetedzwa zvachose munzvimbo.
Bata OptiSmile Nhasi
Tinosarudza kukufonera asi zvimwe tikatadza kusvika ndapota tipe email kero yako (hatife takatengesa ruzivo rwako)
[contact-form-7 id = "15252" title = "Bata OptiSmile Nhasi"]
Kunyemwerera kwakanaka kunogona kuita kuti unzwe uine chivimbo mukati zviri nyore kutaura nekunze - mubatanidzwa wakakwana wekukwezva vanhu munzvimbo yemagariro, yehunyanzvi kana yerudo. Nekunyemwerera kugadzirwa, vanachiremba vedu vemazino vanogona kugadzirisa kunetseka kwakawanda kwemazino panguva imwe chete vachikupa shanduko yekunyemwerera. Kusaina kushandurwa kwakazara kunogona kunzwa kunetesa, asi kunyemwerera kwekunyemwerera kunoitwa nekufamba kwenguva nematanho madiki maitiro ayo anozoita kuti mazino ako ave akachena, akasvinuka uye akapfeka yunifomu - uchiri kungotarisa zvakasikwa. Vanodzivisa vedu vanotora zvakasiyana siyana mukutarisa kuti vakupe kunyemwerera kwakanaka; kusanganisira nechitarisiko chako chechiso, toni yeganda, bvudzi bvudzi, mazino (ruvara, upamhi, kureba, chimiro uye kuratidzwa kwemeno), chingamu tishu nemiromo. Kunyemwerera makeovers kunoitwa nekuda kwezvikonzero zvakawanda uye zvakagadziriswa zvinoenderana neyako yakasarudzika kufunga.
Zvichienderana nezvamunoda mhedzisiro, isu tinokurudzira akateedzana ezvizoro uye anoshanda maitiro. Maitiro akajairika anosanganisirwa mukunyemwerera kuita mazino kuchenesa, kubatana kwakabatana, kusaoneka uye veneers emazino. Isu tinokurudzirawo kudyara uko mazino akarasika. Maitiro aya ane mhedzisiro inokatyamadza yavo vega, asi ipa shanduko huru kune kunyemwerera kwako kana zvabatanidzwa! Mazuvano ekushongedza mazino anogona kukubatsira kuti uwane meno awakagara uchida, zvisinei nekuti mamiriro ekunyemwerera kwako azvino. Kunyangwe iwe uchida kuchenesa meno ako, ruramisa kunyemwerera kwako, kana kugadzirisa zvisina kujeka kuruma kusarongeka - timu yedu ichakubatsira iwe kuwana mhinduro.
KuOptismile, tinotenda kuti cosmetic mazino anofanira kusimudzira hutano pamwe nekuonekwa kwekunyemwerera kwemurwere. Isu tinoshandisa mhinduro dzekuvandudza kuruma kwako uye hutano hwemeno nekukupa kunyemwerera kunopenya. Kana iwe uri kufunga nezve chero ekushongedza mazino maitiro, bata OptiSmile izvozvi. Tine timu yemazino inokodzera ine yazvino muhunyanzvi hwemazino hunowanikwa kuita chero eema cosmetic maitiro ari pamusoro.
Yakawanda Sei Inodhirowa Dentistry Inodhura muSouth Africa?
Izvo zviyero zvinoratidzwa pano zviyero. Zvingave zvakanaka kuti upinde mutsika yekubvunzurudza kuitira kuti mutengo ugoiswa pamwechete
Google Tsika Tsvaga yedu webhusaiti yekukurumidza kuwana kune ese mapeji
Mon 8am - 5pm, Chipfumbamwe 8am - 5pm
Wed 8am - 5pm, China 8am - 5pm
Dzvanya Pano Kuti Utange Yako Yemahara Pamhepo Dental Bvunza